Ukanyanya kutamba nevakomana… – Daniel Mutendi
Grade 0 ECD
Home > Blog > Daniel Mutendi > Ukanyanya kutamba nevakomana…
Mwana wemuZimbabwe anotaura ChiShona chakanyanya kurerekera kuChiKaranga.
Aug 01, 2016 4 Likes 26774 Views Standard
Ukanyanya kutamba nevakomana…
Kubva mazuva angu ndichirikuchikoro, ndaigara ndichihwa vakuru vachiraira vanasikana kunyanya. Zvainzi ‘kana ukanyanya kufarira kutamba nevakoma, unoita pamuviri’ Izvi ndaizvihwa posepose, kungava kumba, kuSvondo kana pamaTV nemumaradio. Nanhasi ndinongohwa vakuru vachidzokorora mashoko iwawa. Vakomana vanoudziwavo asi zvishoma, kuti kana vakanyanya kufarira kutamba nevasikana, hazvishamisa kana vakaita vanababa vemba vasati vada. Mashoko awa akanaka chose uye haafanigwa kuregwa kutaugwa. Zvakadero hazvo, ini ndinofunga kuti vabereki nevamwe vakuru havasi kumadzidzisa zvinoudzamu kana kuti zvakakwana. Imbohwai kuti ini ndakabatwa nazvo sei.
Tapedza kuchata muna 2010, mudzimai wangu wakanonga pamuviri. Takafara chose nechiitiko ichi. Zvakanga zvisina kana kumbonetsa zvazvo. Sekuraira kwevakuru, mudzimai wangu akanga angonyanya kutamba nemukomana (ini), nekuda kwaizvozvo nhumbu yakavapo. Izvi zvaingoreva kuti chaizotevera chakanga chichingovavo nyore; mwana! Pamuviri pacho pakava pakanaka chose. Vadzimai vakangogwadziwa zvishoma-shoma mazuva ekutanga, kurutsa apo nepapo ndiye hwa-a. Ini ndaitothlira hangu kusema kwangu kuti kana nyaya yekupfira-pfira mate kunoitwa nevakadzi vazhinji kana vakazvibereka kwauya, moyo wangu waizokurumidza kumuruka, asi izvi hazvina kuitika. Zviya zvekuti kwai ndoshuvira kudhla murivo wemuboora mazuva awunenge usiko pakanga pasina. Kwanachiremba taiinda hedu asi taingondoudzwa kuti zvose zvakanga zviri mugwara. Ndakatombofunga kuti kuya kunonzi kushusha kwemadzimai anepamuviri kwaingova kuyema kogokoga.
Nenguva isipi, takanga taunganidza zvizhinji zvakawanda zvegadziriro yemwana waizouya uyu. Zita remwana rakanga ratovapo chero hazvo nguva dzose dzataida kuti mwana avhenekwe kuti tione kuti aiva murudzii, chimwana chacho chaivhara makumbo, mushini woshaya kuti mwanai. Takasvika pakusiya zvakadero tikati tohoona kana zuva razvo rasvika. Zuva razvo harikoni kusvika. Ringaita serinononoka haro asi kusvika rinosvika chete. Redu rakasvika pachine svondo mbiri kuti panerakanga rataugwa nanachiremba risvike. Hama dzangu, zvatakagashira musi uyu zvakatirovesa nehana. Takasvika kuchipatara tinemufaro mukuru chose asi vanamukoti vakasvika vachishayiwa hana yemwana. Kutosheedza mbuya nyamukuta vepachipatara ichi, vakangouyavo vakahwa mudumbu murizii. Kuzoinda pascan, zvikahi mwana wakanga atova nemazuva matatu atisiya arimo mudumbu imomo. Fungai kuti takahwa sei ipapo…
Mwana akanga azvisungirira nerukuvhute gwake arimuchibereko chamai vake. Kugwadziwa kwatakaita kunonetsa kurondedzera. Unohwa semunhu abigwa zvinhu zvake zvose. Unoona sekuti nyika yose irikukuseka chero vanhu vachikuhwira tsitsi. Sevanhu vanotenda kunaNyadenga, Takagashira zvakanga zvaitika tikaindirira mberi nehupenyu hwedu. Pakutaura nevanhu vakawanda, takashamisika kuti zvakanga zvaitika kwatiri zvinhu zvaitika kunevazhinji chaizvo. Rukuvhute gwapedza vana nemadzimai akawanda. Ndakashama kuziva kuti mai vangu vakanga varashikigwa nemwana wavo wekutanga nezhira iyoyovo. Zvose izvi hazvinyanyi kudzidzisiwa kuvana vachikura.
Ndakatamba nemudzimai wangu zvakare mashoko evakuru akaramba kuwira pasi. Nenguva isipi vadzimai vangu vakanga varema futi. Chakatanga chakanga chanjedza zvino. Takarava uye kuvhunza nyanzvi zvekuita kuti tichengetedze mwana arimudumbu kusvika abuda. Takadzidza zvakawanda veduwe. Pamuviri apa pakauya pari pamuviri chaipo. Zvose zviya zvinonyangadza zvakauya zvikaungana panaTsitsi. Kurutsa, kuramba zvokudhla zvaanenge ati anoda ndikandozvitsvaka kurekure, uye kuwandigwa nemate mumuromo. Chakandifadza hacho ndechekuti pamuviri pacho hapana kushandura uso hwaTsitsi. Akaramba achingova nhongoramutsipa yakakwana. Chero mate ake aipfirigwa munechimwe chibhotoro chaiita sechchimwiwa chakabva mhiri chaiko. Pakawanda pandakapotsa ndamwa mate iwawo…
Chiremba vedu vakakurumidza kuona kuti vadzimai vangu vakanga vane inonzi placenta privea. Chavakuru (placenta) chinenge chakanyanya kudzikira kuzasi kwechibereko uye chinenge chakabatira zvisina kusimba pamadziro echibereko. Kana zvadai, vana chiremba vanokurudzira kuti mudzimai anenge aita chifo ichi agare mumba, nguva zhinji ipere akavata. Zvekuuruka-uruka, kujatiwa kana kufara pabonde hazvikurudzigwi nekuti chevakuru chinogona kungotsvedzemuka pamuviri potadza. Apa nguva inenge ichakawanda chose. Mai nemwana wavo vanenge varipanguva yakaoma chaizvo nekuti njodzi inenge iripedo-pedo. Nekuti chavakuru chinenge chirikuzasi, kana nguva yekuzvara yasvika ndicho chinogona kutanga kuda kubuda. Pakudai chinogona kudzivirira panobuda nemwana naizvozvo mai nemwana vanogona kufa ipapoipapo. Kuzvara kwacho kunenge kotoda zvekuvhiyiwa kuti mwana abudisiwe. Fungai kuti kana zvakadai zvichiitika kuvanhu vanogara kure nezvipatara vanoita zvekudii chaizvo? Pakagozha apa.
Chiremba vedu vakatikurudzira kuti tizame chose kusvika masvondo anokwana makumi matatu anamatanhatu (36 Weeks) mwana arimudumbu. Vana vazhinji vanenge vasvika vanozvagwa vane masvondo makumi mana kusvika kumakumi mana anemaviri. (40-42 Weeks) Vanoti kana mwana akazobuda hake kwapera nguva yakadai, mukana wekurarama unenge wavapo zvakanyanya. Mazuva edu akafamba zvishoma nezvishoma sevanhu vaiziva kuti hupenyu hwevanhu vaviri hwakanga huri mumaoko chaimo. Scan yakaratidza kuti chero pakanga pane dambudziko replacenta privea, mwana wedu wakanga akachinjika zvake (breech) sezvinonzi aida kuzobuda nemuhuro mamai vake. Tichisvika masvondo makumi matatu anemaviri (32 Weeks) Jasmine Mufaro (mwana wangu) akafunga hake kuti akanga asingachadi zvekugara mudumbu mamai vake. Ndakarova runhare kuna chiremba wedu tikabva tavanga takananga kuchipatara. Jongwe takanga taribata muromo izvozvi. Vana chiremba vakarodzera mapanga avo ekuti vavhiye Tsitsi. Moyo wangu ndakanga ndabatira mumaoko zvino. Takanyengetera kunaMwari, Tsitsi akavata nemusana kuti achindochekwa. Aitaridza kusimba chaizvo asi mumeso ake ndaiona kuthla. Chekuita ndakashaya.
Takaudziwa nachiremba kuti kana mwana wedu aizobuda arimupenyu aizofanira kugara muincubator kusvika ava nehuremu hunoita 1,8kgs. Izvi zvaireva nguva yakareba chaizvo arimuchipatara. Mwari wedu wakaramba akamira nesu paguva iyi. Basa rakabatwa, mwana akabuda zvakanaka. Akatobuda achirema 2,1kgs! Naizvozvo akangoita 8hours chete arimuincubator. Pasina nguva mwana akanga atova parutivi gwamai vake. Akatotanga kunzi achiinda hake kumba mai vake vasati vabudisiwa muchipatara nachiremba. Svondo iri rakapera rose ndichiridza Ndirendire, gwiyo gwaBambo vangu Samere. Nhasi uno tava nevana vedu vaviri, chisikana nechikomana. Tinodada nekuvonga Mwari nebasa guru iri.
Tinemufaro mukuru chose nemhuri yedu asi gwendo gwedu gwakanga gwakaoma chose. Nanhasi tirikungodzidza zvitsva tichiinda. Iyezvino tavakuziva kuti mhuri dzakawanda, kunyanya vanhukadzi, vanosongana nenhamo dzakawanda chaizvo pakubereka vana. Kunenhamo dzemari, kugwadziwa nyama chaiko uye kugwadziwa mufungwa muzhira yekuita vana. Kune njodzi dzakawanda dzinosongana nevanhu vanepamuviri dzisingaudziwi vechidiki nevakuru zvakakwana kuti vagadzirire. Muno muAfrica, munemadzimai akawanda chaizvo anofa panguva dzekuzvara. Vanozihwa vatorivashoma nekuti vamwe vanongofa pasina anoziva kuti chauraya chii. Zvakadai sezvizvi, vabereki, kanamoudza vana kuti kana vakatamba nevakomana vanoita pamuviri, munofaniravo kuvaudza kuti vanogona kutofa nekuda kwepamuviri ipapo.
Zvekuti vana vanozvagwa vakafa zvinhu zvinogona kutapudziwa chaizvo. Hon’o, kana Mwari aronga, hapana anogona kuramba, asi zviripo zvakawanda zvatinokwanisa kuita isu sevanhu nefungwa dzaakatipa zvakaita sekuti titapudze kufa kwevavana vasati vabuda mumatumbu emadzimai avo. Vakatsoropodza nyaya iyi vakaona kuti vana vakawanda vanozvagwa vakafa vanowanikwa kunzvimbo dzekumaruwa, uko kunezvipatara zvishoma kudarika vemumadhorobheni. Zvakonekwa zvakare kuti vana vanozvagwa varivapenyu vakawanda kunyika dzakabudirira kudarika vekunedzichirikusumukira. Izvi zvinoreva kuti isu sevabereki, uyevo hurumende yedu, tinedzoro uye tinofanira kuzvimanikidza kuti tidzidzise vana vedu zvinoitika kana munhu anonga pamuviri. Iyi idzidzo yakakosha chose.
Zvakawanda zvimwe zvidzidzo zvandisina kunyora pano zvinowanikwa kana munhu atora pamuviri. Vabereki havatauri nezvekudhura kunoita vana. Havatauri kuti mwana anogona kungofunga zvekugwara pasina nguva uye kana agwara kudaro haakuudzi kuti chashupa chii. Havatauri kuti mwana unochema kana akatsamwa, akafara, akada kuita svina, akahwa zhara, akatsva kana kuti zvimwe zvakawanda-wanda. Havatauri kuti zvekuvata dzedanda zvinenge zvapera. Ini hangu ndakaita rombo rakanaka kuti ini navadzimai takanga tava nezvimabasa zvaitipa muripo wekuti taikwanisa kubhadhara zvaidiwa kuti hupenyu hwedu nemwana hufambe zvakanaka. Fungai vanozviita vachiri kuchikoro… Ndakadzidza kuti mudzimai wangu akanga ariumwe wevashoma vane varume vanenge varipo pagwendo gwakaoma ugu. Ini ndakatopinda chero mutheatre mavaivhiyiwa ndikatotanga kuona vana vangu vose ndichitotora video yezvaiitika.
Kuvana vechikoro nedzimwe mhandara, wakuruma zheve ndewako, ndopedzisa kuruma ndichiti, ‘ukanyanya kukatamba nevakomana unogona kutanga gwendo rurefu gunogwadza chose uye gwendo gwacho gunogona kutokuuraya chaiko.’ Zvakakosha kuti utsvake ruzivo gwezvinogona kuzova mberi kwako mugwendo ugu. Kuva nepamuviri idambe pakuita asi zvinotevera hazvisi dambe. Mai vangu vakandiudza kuti kana mukadzi azvara mwana mupenyu anonzi ‘apona’ nekuti paanenge anepamuviri anenge akatarira njodzi chaiyo.
Categories: Daniel Mutendi
Machongwe Maviri Pamutanda Mumwe
Ukadzvara nyama unocheka honye
Kutsvuka Wakura SeBhuru-Mango
4 thoughts on “Ukanyanya kutamba nevakomana…”
March 11, 2019 at 15:12
+ADw-a href+AD0-http://7carol17.blogspot.com+AD4-Hi+ACE Interested in VVi+BDM-th? Chek my blog+ADw-/a+AD4
Maikoro Juru says:
August 4, 2016 at 03:09
Apa panyogwa nemuvhitori zvomene!
kuda. Marimbe says:
August 1, 2016 at 22:26
Izvirokwazvo mbuya vangu vakadero- kupona panjodzi
Copyright © Daniel Mutendi 2016. All Rights Reserved.